IMEX America Smart Monday keynotes dia manasongadina dokotera, mpandihy ary guru nomerika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » IMEX America Smart Monday keynotes dia manasongadina dokotera, mpandihy ary guru nomerika
Associations News • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fandaharam-pianarana feno maimaim-poana mihazakazaka mandritra ny seho IMEX America, manomboka isan'andro miaraka amin'ny laharam-pahamehana MPI - andiana mpivezivezy sy mpihira avy ivelan'ny indostrian'ny hetsika orinasa izay samy hitondra ny fahitan'izy ireo an'ity tontolo ity.
Voalohany dia hiteny ao amin'ny IMEX America MPI keynotes dia ho dokotera nahazo fampiofanana Harvard.
Manaraka eo amin'ny laharana, dia iray izay mitazona ny fanavahana ho "mpanoratra be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao."
Ary farany, ny mpanorina ny hetsika dihy manerantany. Ireo no mpandahateny lehibe ao amin'ny IMEX America any Las Vegas amin'ity volana novambra ity.
Keynotes an'ny IMEX AMERICA MPI
• Dr. Shimi Kang dia dokotera, manam-pahaizana momba ny haino aman-jery aryofana momba ny antony manosika ny olombelona, ​​nahazo fampiofanana Harvard. Nandritra ny 20 taona niainana klinika sy fikarohana be dia be tamin'ny siansa izay ao ambadiky ny fanatsarana ny fahiratan-tsain'ny olombelona, ​​Shimi dia napetraka hanome fitaovana azo ampiasaina hambolena ny fahaiza-manao manan-danja amin'ny taonjato faha-21, ny fifandraisana, ny famoronana ary ny maro hafa.
• Ny mpanoratra be mpividy indrindra Erik Qualman dia hizaha ny “socialnomics” - ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiainantsika andavanandro, sy ny fomba hampiasan'ny orinasa ny heriny. Ny torohevitra nomeny farany dia nampiasain'ny fikambanana anisan'izany ny National Guard sy NASA ary nahatonga azy ho voafidy ho iray amin'ireo 'mpanoratra be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao'.
• Amin'ny maha mpiara-manorina sy CEO ny hetsika dihy manerantany azy dia fantatr'i Radha Agrawal izay ilaina amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina. Daybreaker, dihy maraina ary hetsika fikarakarana fahasalamana, dia manao hetsika any amin'ny tanàna 25 manerantany miaraka amina vondrom-piarahamonina misy olona efa ho iray tapitrisa ary i Radha dia hizara ny fomba nitondrany an'io foko matanjaka be fitiavana io.
Manomboka amin'ny Alatsinainy Smart ny fianarana
Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, no laharam-pahamehana ho an'ny programa fanabeazana IMEX ao amin'ny IMEX America. Atao amin'ny 8 Novambra, ny alatsinainy Smart dia andro iray ianarana tanteraka alohan'ny hanokafana ny seho amin'ny 9 - 11 Novambra. Ny programa dia natsangana indray mba hita taratra ny fiovan'ny filan'ny matihanina amin'ny hetsika miaraka amin'ny orinasa mifantoha amin'ny fananganana miverina tsaratsara kokoa.
Anisan'ireo mpandahateny ireo: Janet Sperstad, talen'ny Faculty, Solosaina momba ny fitantanana hetsika ao amin'ny Madison College; Guy Bigwood, talen'ny fitantanana ny hetsika maharitra maharitra Global Destination ary mpanoratra ny IMEX's Tatitry ny Revolisiona Famerenana; ary David Allison, mpanorina ny Valuegraphics, fomba iray mitarika ny soatoavina sy ny saina amin'ny marketing.
Hisy ihany koa ny fivoriana avy amin'ny IAEE, EIC ary MPI, miampy ny She Means Business izay manangona vehivavy mpitarika mba hampandroso ny resaka momba ny fahasamihafana sy ny fitoviana eo amin'ny sehatry ny hetsika orinasa.
Annette Gregg, SVP of Experience ao amin'ny MPI, dia nilaza hoe: “Faly indray izahay fa mpiara-miombon'antoka amin'ny fanabeazana ho an'ny IMEX America, fandaharana ny Alatsinainy Smart ary ny teny fototra andavanandro. Niara-nanangona mpandahateny voafantina sy misy fiantraikany lehibe izahay izay miresaka momba ny fampandrosoana manokana sy matihanina. Manantena ny IMEX America mahomby iray hafa izahay ho an'ny vondrom-piarahamonina misy hetsika. ”
"Ny fandaharan'asanay mianatra dia vato fehizoron'ny IMEX America hatrany," hoy ny fanazavan'i Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX. “Tsy mihoatra noho ity tamin'ity taona ity raha ny matihanina amin'ny hetsika orinasa dia maniry ny loharano sy ny fifandraisana hitety raharaham-barotra miharihary. Faly izahay miara-miasa amin'ny MPI hanolotra andian-teny fototra mahafinaritra, manam-pahaizana rehetra amin'ny sehatra misy azy ireo, mizara fomba fijery vaovao momba ny fitondran-tenan'olombelona amin'ny lafiny maro. Ny fitondran-tena tsara amin'ny familiana, araka ny fantatsika, dia mipetraka ao am-pon'ny drafitra rehetra sy ny fanatanterahana hetsika. ”
Antsipiriany misimisy momba ny feno Alatsinainy hendry hiseho tsy ho ela ny programa.
fisoratana anarana dia misokatra ho an'ny IMEX America atao ny 9 - 11 Novambra ao Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, ny 08 Novambra. Raha hisoratra anarana - maimaimpoana, kitiho Eto.
Ny tanjon'ny IMEX tokana dia ny fampiraisana sy fampiroboroboana ny indostrian'ny fihaonana - fanaovana izay rehetra azony atao hampianarana, hanavaozana ary hanampiana ireo mpandray anjara hanao fifandraisana matanjaka amin'ireo olona marina. Tontolo iray izay hiampitan'ny orinasa tsara ny sisin-tany sy ny ranomasina, izay ahafahan'ny mpandamina fihaonana mifanerasera mora amin'ireo mpamatsy manerana an'izao tontolo izao ary manangana fifandraisana miasa matanjaka - izany no fahitan'ny IMEX.
Ny kalitao dia mamaritra ny zava-drehetra ataon'ny IMEX, manomboka amin'ny fomba famolavolana ny fampirantiany mba hifanaraka amin'ireo mpandray anjara, hatramin'ny fomba anaovany fanamarihana tsara ny antsipirihany rehetra momba azy ireo. IMEX dia mino ny herin'ny fampivondronana ny olona hizara hevitra, hahita fitaovana vaovao, hianatra fahaiza-manao vaovao, ary hanome aingam-panahy ny fanavaozana.